एसियाडमा जापानसँग नेपालको हार
काठमााडौं साउन ३०, फुटबलमा एसियाको पावर हाउस मानिने जापानसँग नेपाल एसियन गेम्स(एसियाड)मा सबैभन्दा पराजित भएको छ। नेपालले मंगलबार इन्डोनेशियामा जारी एसियाडमा १–० को हार ब्यहोरेको हो।सिकाराङस्थित विबावा मुक्ति रंगशालामा भएको समूह ‘डी’ को पहिलो खेलमा जापानका लागि सातौ मिनेटमा मिटोमा काउरुले निर्णायक गोल गरेका थिए। एसियन गेम्स(एसियाड)को औपचारिक...
काठमाडौँ साउन २९, पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय प्रतियोगिता खेले लगत्तै नेपाली खलाडी बरियतामा समावेश भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)ले सोमबार सार्वजनिक गरेको बरियतामा नेपालका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी र ज्ञानेन्द्र मल्ल परेका छन् । सन्दीप २१७ औँ स्थानमा छन् भने सोमपाल २२९ औँ तथा ज्ञानेन्द्र २३६ औँ बर...
काठमाडौं साउन २८, भुटानमा जारी दोस्रो यू–१५ साफ च्याम्पियनसीप महिला फुटबल अन्तर्गत आज नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशको सामना गर्दैछ । खेल साँझ पौन ७ बजे थिम्पुमा हुनेछ । यसअघि शनिबारको पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तानमाथि ४–० को फराकिलो जीत हासिल गरेको थियो । नेपालको तुलनमा बङ्गलादेश निकै बलियो टोली हो । पहिलो संस्करणको विजेता बङ्गलादेशले ...
क्यानको विवाद: समाधानका लागि बैठक बस्दै ,भेटिएला त निकास ?
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले बनाएको मनिटरिङ कमिटीको बैठक आज बस्दैछ । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा सोमबार र मंगलबार बैठक बस्न लागेको हो । गत वैशाखमा निलम्बित क्यानले विशेष साधारणसभाबाट आईसीसीको सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान अनुमोदन गरेको थियो । विधान अनुमोदन भएसँगै मनिटरिङ कम...
एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता :आज नेपालले थाइल्यान्ड सँग प्रतिस्पर्धा गर्दै
काठमाडौं साउन २५, १८औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीमा रहेको नेपाली यु–२३ टिमले आज थाइल्यान्डको यु–२३ फुटबल टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । नेपालले यो दोस्रो अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो । नेपाली यु–२३ र थाइल्यान्डको यू–२३ टोलीबीच थाम्मासत युनिभर्सिटीको खेल मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । आज साँझ हुने खेलमा दुबै टिम जितको खोजिमा हुनेछन...
एजेन्सी । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेको टिम सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रियट्सले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) क्रिकेटमा आज आफ्नो पहिलो खेल खेल्दैछ । आज (बिहीबार) देखि सुरु भएको सीपीएलमा प्याट्रियट्सले आफ्नो पहिलो खेल गुयाना एमेजोन वारियर्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । नेपालका सन्दीप लामिछाने पनि प्याट्रियट्स क्लबमा आबद्ध छ...
'आत्मघाती'गोलको कारण नेपाल पराजित
थाइल्यान्डमा जारी एशियाली खेलकूदको तयारी गरिरहेको नेपाली यू–२३ फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएको छ । मंगलबार साँझ थाइल्यान्डको राजधानी बैंककस्थित बुन्याचिन्दा रंगशालामा त्यहाँको पुलिस टेरो एफसी क्लबसँग नेपाल १–० गोल अन्तरले पराजित भएको हो । नेपालका आदित्य चौधरीले खेलको ३९औँ मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेका थिए । चौधरीले बल क्लियर गर्न खोज्द...
भारतद्धारा नेपाली क्रिकेट टोलीलाई सिरिज खेलको निम्तो
काठमाडौं साउन २२, नेपाली यु १९ राष्ट्रिय टोलीले भारतमा चार टोलीबीच हुने यू–१९ एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज खेल्ने निम्तो पाएको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को आयोजनामा हुन लागेको ५० ओभरको प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत र अफगानिस्तानका यू–१९ टोलीले कोलकातामा खेल्ने भएका हुन् । चौथो टोली नेसनल क्रिकेट एकेडेमी (एनसीए) यू–१९ टोली छ । यो बीसीसीआईको...
काठमाडौं साउन २०, नदेरल्यान्ड्ससँग एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज खेलेको नेपाली क्रिकेट टिम भोलि (सोमबार) स्वदेश फर्किने भएको छ । नेपाली समयअनुसार क्रिकेट टिम बिहान ८ बजेर ५० मिनेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ । नेदरल्यान्ड्सबाट नेपाली क्रिकेट टिम आज इंग्ल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछ । इंग्ल्यान्ड हुँदै स्वदेश फर्...
दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट: आज नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग भिडदैछ
काठमाडौं साउन १८, नेपालले आज नेदरल्यान्ड्ससँग दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट खेल खेल्दैछ। आम्सटर्डमको भिआरए मैदानमा हुने खेल नेपाली समयानुसार दिउँसो २ः४५ बजे सुरु हुनेछ। दुई खेलको शृंखलामा १–० ले पछि परेको नेपालले आज बराबरीका लागि पनि जित्नैपर्ने दबाव छ। बुधबार भएको पहिलो एकदिवसीय खेलमा नेपाललाई नेदरल्यान्ड्सले ५५ रनले पराजित गरेको थियो। पहिलो खे...
नेदरल्यान्ड्ससँगको एक दिवसीय खेल हार्नुको कारण यस्तो छ -कप्तान पारस खड्का
काठमाडौं । नेदरल्यान्ड्ससँगको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिजको ऐतिहासिक खेलमा नेपाल पराजित हुनुको मुख्य कारण एकपछि अर्को विकेट पतन हुनुभएको कप्तान पारस खड्काले बताएका छन् । नेदरल्यान्ड्ससँग नेपाल ५५ रन पराजित हुदै गर्भिलो इतिहास बनाउनबाट चुकेको थियो । इएसपीएनक्रिकइन्फोलाई कप्तान खड्काले लक्ष्य सानो भएपनि राम्रो खेल्दा खेल्दै हार्न पुगेको बताए । कप्त...
साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेल नेपाल पाकिस्तानसँग खेल्नेछ (खेलतालिका सहित)
एजेन्सी । बंगलादेशको ढाकामा हुने १२ औं साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । सेप्टेम्बर ४ देखि १५ सम्म चल्ने टुर्नामेन्टमा ७ देश सहभागी हुँदैछन् । साफको ७ पटकको च्याम्पियन भारतलगायत पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, नेपाल, भुटान र बंगलादेशले च्याम्पियनसिप खेल्नेछन् । समूह ए मा नेपालसहित पाकिस्तान, भुटान र बंगलादेश रहेका छन् भने समूह...
नेदरल्याण्डसँग पहिलो एक दिवसीय खेल खेल्दैछ नेपाल
काठमाडौँ साउन १५, गत चैतमा जिम्बावेमा सम्पन्न आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टुको उपविजेता बन्दै एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपालले एक दिवसीय खेलमा बुधबार पहिलो खेल खेल्दैछ । नेपाली समयानुसार बुधबार दिउँसो २ः४५ बजे नेदरल्याण्डस्थित भिआरए मैदान, आम्स्टरडममा नेपाल र नेदरल्याण्डबीच एक दिवसीय खेल हुने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले जनाएको छ ।सन् ...
त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज: एमसीसी माथी नेपालको शानदार जित
काठमाडौँ साउन १४, बेलायतको लर्ड्स क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा नेपालले मेरिलोबन क्रिकेट क्लब(एमसिसी)लाई नौ विकेटले पराजित गरेको छ । नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि एमसीसीले ६ ओभरको खेलमा चार विकेटको क्षतिमा ४० रन बनायो । नेपालले ४१ रनको विजय लक्ष्य ४ दशमलव ४ ओभरमा एक विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो । वर्षाका कारण २...
काठमाडौं साउन १३, नेपालले नेदरल्यान्ड्स र एमसीसीसँग त्रिकोणात्मक टि–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिज खेल्दैछ । क्रिकेटको घर लर्ड्समा नेपालले सिरिज खेल्न लागेको हो । क्रिकोणात्मक सिरिजअन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा क्रिकेटकै पुरानो क्लब मेलर्बोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) सँग बेलुकी ६ बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेल एमसीसी र नेदरल्य...
एसिसी एसिया कपमा नेपालसहित ६ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ
काठमाडौं साउन ११, एसिसी एसिया कप छनोट प्रतियोगिता मलेसियामा हुने भएको छ । यसअघि भारतमा हुने भनिएको प्रतियोगिता अब मलेसियामा हुने एसियाली क्रिकेट काउन्सिल(एसिसी) ले जनाएको छ।प्रतियोगिता आगामी भदौ ११ देखि २२ गतेसम्म मलेसियामा हुने एसिसीले जनाएको हो। छनोट प्रतियोगितामा ६ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। युएई, हङकङ, नेपाल, सिंगापुर, मलेसिया र ओमानबी...
तेस्रो अभ्यास खेलमा ईष्ट लण्डन माथि नेपालको शानदार जित
काठमाडौं श्रावण १०, इंग्ल्याण्ड भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले तेस्रो अभ्यासमा ईष्ट लण्डन क्रिकेट क्लबमाथि २ सय २३ रनको शानदार जित हासिल गरेको छ । ईष्ट लण्डनको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा नेपालले पुरा ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ३ सय ३८ रन बनाएको थियो । ३ सय ३९ रनको लक्ष्य पछ्याएको ईष्ट लण्डन ३८ दशमलभ ५ ओभरमा १ सय १५ रनमा समेटियो । उ...
नेपालको तेस्रो अभ्यास खेल इष्ट लन्डन–११सँग ,खेल ३ : ४५ मा सुरु हुदैछ
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम यतिबेला लन्डन र नेदरल्यान्डस् टुरका लागि लन्डनका स्थानीय क्लबहरुसँग अभ्यास खेल खेल्दैछ । बुधबार नेपालले आफ्नो तेस्रो खेल लन्डनको इष्ट लन्डन ११ क्रिकेट क्लबसँग खेल्दैछ । नेपाल र इष्ट लन्डन ११ बीचको खेल नेपाली समयअनुसार ३ बजेर ४५ मिनेटमा सुरु हुनेछ । यसअघि नेपालले पहिलो अभ्यास खेल ५० ओभर र दोस्रो खेल २० ओभर...
बुटवल । विद्यालयस्तरीय एन्फा कपको फाइनल खेल आज हुदैछ । एन्फा टेक्निकल सेन्टर देबिनगरमा सन्चालीत एन्फा कपको फाइनल आज दिउसो हुन लागेको हो ।हिजो सम्पन्न सेमिफाइनल खेलमा छात्रातर्फ स्मृती बोर्डीङले सिद्धार्थलाइ २ –१ ले पराजीत गर्दै फाइनलमा शान्ति नमुनासगको भेट पक्का गरेको हो । त्यस्तै अर्को सेमिफाइनल खेलमा शान्तिले नबिन औधोगीक माबीलाइ ४ शुन्यले परा...
एजेन्सी । आर्सनलका जर्मन मिडफिल्डर मेसुट ओजिलले अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् । जर्मन फुटबल एसोशिएसन (जिएफए) को वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि आफूलाई जातिवादीको आरोप लागेको भन्दै ओजिलले सन्यासको घोषणा गरेका हुन् । ओजिलले जातिवादी भन्दै आफूलाई अपमान गरिएको बताएका छन् । जातिवाद आफूलाई कहिलै स्वीकार्य नहुने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ...
काठमाडौँ २, साउन एसियाली महादेशको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताका रुपमा मानिएको १८औँ एसियाली खेलकूदमा यसपटक नेपालबाट चार नयाँ खेलले स्थान पाएका छन् । इण्डोनेसियाको राजधानी जार्कातामा आगामी भदौ २ गतेदेखि १७ गतेसम्म हुने यसियाली खेलकूदमा प्याराग्लाइडिङ, क्लाइमिङ स्पोर्ट, पेनकेक सिलात र स्केटबोर्ड गरी चार नयाँ खेल छनोटमा परेका छन् । यसपटकको एसिय...
लन्डन, ४ साउन इंग्लिस क्लब लिभरपुलले ब्राजिलियन गोलकिपर एलिन्सनसँग कीर्तिमानी रकममा सम्झौता गरेको छ।इटालियन क्लब रोमाबाट लिभरपुलले ७२.५ मिलियन युरो (९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) मा सम्झौता गरेको हो। योसँगै एलिन्सन विश्वकै सर्वाधिक महँगा गोलकिपर बनेका छन्। ब्राजिलका पहिलो रोजाइका गोलकिपर एलिन्सनले गत २ सिजन इटालिएन सिरि ए खेले। २५ वर्षीय उनले गत...
'बुटवल कोरा २०१८ साइक्लिङ्ग'च्यालेन्ज पर्सी शनिबार हुदैछ
बुटवल । बुटवलमा पर्सी बुटवल कोरा २०१८ साइक्लिङ्ग च्यालेन्ज हुने भएको छ ।नेपालको पहिचान विश्वसामु चिनाउने अभियान थालेका स्वर्गीय नारायण गोपाल मर्हजनको स्मृतिमा पर्सी बिहान बुटवलमा साइक्लिङ्ग च्यालेन्ज हुन लागेको हो । रुपन्देही साइक्लिङ्ग संघ र साइकिल सिटी बुटवलको आयोजनामा हुने साइक्लिङ्ग च्यालेन्जमा २ सय साइकलयात्रीहरु सहभागिता रहने आज बुटवलम...
'एक दिवसिय'अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भाग लिन नेपाली क्रिकेट टोली बेलायत जाँदै
काठमाडौं ३, साउन बेलायतको लर्ड्समा हुने एमसीसी, नेदरल्याण्ड् सम्मलित त्रिकोणात्मक श्रृखंला र नेदरल्यान्ड्विरुद्ध हुने एक दिवसिय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भाग लिन नेपाली टोली बिहीबार बेलायत प्रस्थान गर्दैछ । बेलायत जान लागेको टोलीलाई युुवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत (सुनार) विश्वकर्माले सफलताको शुभकामना दिँदै बुधबार विदाई गरे । त्रिकोणात्मक श्रृखंला...
चार वर्षपछि हुने विश्वकप फुटबलमा नेपाली सुरक्षाकर्मी लैजान खोज्दैछ कतार !
काठमाडौं २, साउन चार वर्षपछि कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न कतार सरकार तयार भएको छ । सोमवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको भेटमा नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मदले सुरक्षा गार्डका रुपमा धेरै सङ्ख्यामा नेपाली लैजान कतार इच्छुक भएको बताउनुभएको हो । राजदुत युसुफले नेपाल सु...
मस्को-.असार ३१ पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको क्रोएशियालार्इ ४-२ गोलअन्तरले स्तब्ध पार्दै फ्रान्स दोस्रो पटक विश्वविजेता बनेको छ। यसअघि फ्रान्सले १९९८ मा विश्वकपकको उपाधि उचालेको थियो। दुर्इ वा दुर्इ चोटी भन्दा बढी पटक विश्वकप जित्ने फ्रान्स छैटौं राष्ट्र बनेको छ। यसअघि फ्रान्सले १९९८ मा पहिलो चोटी विश्वकप जितेको थियो। विश्व...
आज फिफा विश्वकप फुटबल खेल फाइनलमा: फुटबलका पारखीहरु चकित !
एजेन्सी । २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबल यसअघिका विश्वकप भन्दा अलिक पृथक हुन पुग्यो । विभिन्न विश्लेषक तथा फुटबलका पारखीहरुलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै क्रोएसिया र फ्रान्स विश्वकपको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । रसियामा जारी विश्वकप फुटबल सुरु हुनुभन्दा पहिले फुटबलका पारखी र विश्लेषकले गरेको अनुमान गलत सावित भइसकेका छन् । फुटबलका धेरै ...
इंग्ल्याण्डलार्इ पराजित गर्दै बेल्जिमयले हात पार्यो कास्यपदक
असार ३० विश्वकपको तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा इंग्ल्याण्डलार्इ २-०ले पराजित गर्दै बेल्जिमयले अाफ्नो विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो इतिहास हात पारेको छ। जितसँगै यस विश्वकपमा कास्यपदक हात पार्नु बेल्जियमको विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। सन् १९३० को पहिलो विश्वकपबाट नै सहभागिता जनाउन सुरु गरेको बेल्जियमले त्यसयता १३ पटक विश्...
विश्वकप फुटबलमा आज तेस्रो स्थानका लागि बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड भिडदै
काठमाडौं ३०, असार एजेन्सी। रुसमा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज (शनिबार) तेस्रो स्थानका लागि बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड खेल्ने भएका छन् । यी दुवै टिमको लक्ष्य हुने छ विश्वकपको तेस्रो हुँदै सुखत अन्त्य गर्ने । समूह जी मा रहेका दुवै टोलीले समूह चरण अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा प्रतिष्पर्धा गरेका थिए, जसमा बेल्जियम १–० ले विजयी भएको थियो। २८ वर्षपछि ...
आइतबार हुनेछ फिफा विश्वकप फुटबलको छिनोफानो ! पुरस्कार कति? बुझनुहोस्
एजेन्सी । २१औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलको उपाधि छिनोफानो यही असार ३१ गते आइतबार लाग्दैछ । उपाधि भिडन्तमा क्रोएसिया र फ्रान्स रहेका छन् । विश्वकपको ट्रफीबाट एक कदम पछि रहेको फ्रान्स दोस्रो पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि उचाल्ने दाउमा छ । यता, विश्वकपको फाइनलमा पहिलो पटक पुगेको क्रोएसिया आफ्नो फुटबल इतिहासमा स्वर्णिम काल बनाउन आतुर छ । विश्वपकक...
क्रोएशिया पहिलो पटक विश्वकप फाइनलमा
एजेन्सी रसिया, असार २८ रसियामा सम्पन्न इङ्ल्याण्ड र क्रोएशियाबिचको खेलमा इङ्ल्याण्ड क्रोएशियासँग २-१ ले निराश भएको छ। २-१ को जितसँगै क्रोएशिया विश्वकप फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ। विश्वकप उपाधिका लागि क्रोएशियाले फ्रान्ससँग भिडन्त गर्नेछ। खेलको १०९ औं मिनेटमा म्यान्डुजिकले गोल गरेपछि क्रोएशियाले विश्वकपमा सहभागी भएको २० वर्षमा नै आफूलाई ...
असार २७ अधिकांश युवा खेलाडीले भरिएको फ्रान्सले रुसमा जारी विश्वकप फुटबलको फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ । मंगलबार राति सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको खेलमा छिमेकी देश बेल्जियमलाई १–० ले हराउँदै फ्रान्सले तेस्रो पटक फाइनलमा स्थान बनायो । बेल्जियमको फाइनल सपना फ्रान्समा सामुएल उमटिटीले ५१ औँ मिनेटमा गरेको गोलबाट टुट्यो । २० वर्षअघि विश्वकपको उपा...
फ्रान्सले जित्नेछ विश्वकप !यस्तो छ आधार
विश्व खेलकुदको ठूलो तथ्यांकीय श्रोत ओप्टाले रुस विश्वकपको उपाधि फ्रान्सले जित्ने दाबीसहितको अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक अध्ययनमा फ्रान्सले विश्वकप जित्ने सम्भावना ४१ प्रतिशत देखाएको छ। यस्तै अध्ययनले दोस्रोमा बेल्जिमय(२१ प्रतिशत), तेस्रोमा क्रोएशिया(२० प्रतिशत) र चौथोमा इंग्ल्याण्ड(१८ प्रतिशत)को विश्वकप सम्भावना देखाएको छ। अध्य...
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने ग्लोबल टि–ट्वान्टी क्यानडा लिग क्रिकेटमा पनि सफल भएका छन् । मोन्ट्रियल टाइगर्समा आबद्ध सन्दीपले क्यानेडियन लिगमा ४ खेलबाट ५ विकेट लिएका छन् । सन्दीपले आफूले खेलेका सबै ४ खेलमा विकेट लिँदै ५ विकेट लिएका हुन् । मोन्ट्रियल टाइगर्सको अन्तिम खेलमा सन्दीपले २ विकेट लिन सफल भए । यद्यपि टाइगर्स टोरोन्टो नेशन...
रसियालाई ४–३ गोलले हराउदै क्रोएसिया सेमिफाइनलमा प्रवेश
काठमाडौं २४, असार विश्वकप फुटबल आयोजक रसियालाई टाइब्रेकरमा पराजित गर्दै क्रोएसिया सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा क्रोएसियाले रसियालाई टाइब्रेकरमा ४–३ गोल अन्तरले हरायो ।अब उसले इंग्ल्याण्डको सामना गर्नुपर्ने छ ।रसियाका फेडर स्लोल्वको पेनाल्टी क्रोएसियाका गोलकिपरले रोकेका थिए । रसियाका गोलकिपर इगर एकिनफिवले क्रोएसियाका मा...
काठमाडौं २३, असार रुसमा जारी विश्वकप फुटबलमा आज(शनिबार) दुई वटा क्वाटरफाईनल खेल हुँदैछन् । सामरा एरिनामा वेलुकी पौने ८ वजे इङ्ल्यान्ड र स्विडेन भिड्नेछन् ।राउण्ड अफ सिक्सटिनमा कोलम्बियालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड तथा स्विट्जरल्याण्डलाई हराउँदै स्विडेन क्वाटरफाईनलमा पुगेका हुन् । इङ्ल्यान्ड र स्विडेनबीचको यसअघिको रेकर्ड हेर्दा इङ्ल्यान्डलाई साँघुर...
काठमाडौँ २२, असार विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आजदेखि क्वार्टरफाइनलका खेल हुँदैछन् । पहिलो क्वार्टरफाइनलमा आज फ्रान्स र उरुग्वे तथा बेल्जियम र ब्राजिल खेल्नेछन् ।फ्रान्स र उरुग्वे बेलुकी पौने आठ बजे र राति पौने १२ बजे बेल्जियम र ब्राजिल खेल्नेछन् । सन् १९९८ को विश्व विजेता फ्रान्स अन्तिमपटक सन् २००६ को विश्वकपमा सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो । उरुग...
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को आयोजनामा आजबाट तेस्रो प्रधानमन्त्री कप शुरु
काठमाण्डौं २१,असार राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) को आयोजनामा तेस्रो प्रधानमन्त्री कप विश्वविद्यालय खेलकूद आजदेखि शुरु हुँदैछ । प्रतियोगितामा पुरुष/महिला भलिबल, ब्याडमिन्टन र टेबलटेनिस तथा बुद्धिचाल (खुला) गरी चार खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने राखेपअन्तर्गत खेलकूद प्रतियोगिता तथा योजना विभागका प्रशासकीय अधिकृत शारङ्गीन निरौलाले जानकारी दिनुभयो...
विश्वकप फुटबलको क्वारटफाइनल पुग्ने टिमहरु सूचीसहित
एजेन्सी । विश्वकप फुटबलको क्वारटफाइनल पुग्ने सबै टिमको टुंगो लागेको छ । प्रि–क्वाटरफाइनलको अन्तिम खेलमा इंग्ल्यान्ड विजयी भएसँगै क्वाटरफाइनलमा पुग्ने टिमको टुंगो लागेको हो । विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा पुग्ने टिमहरु सूचीसहित फ्रान्स, उरुग्वे, ब्राजिल, बेल्जियम, स्वीडेन, रसिया, क्रोएसिया इंग्ल्यान्ड पुगेका छन् । फ्रान...
असार १९ विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा बेल्जियम र ब्राजिल भिड्ने एजेन्सी । विश्वकप फुटबलको क्वाटरफाइनलमा बेल्जियम र ब्राजिलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सोमबार राती भएको प्रिक्वाटरफाइनलमा दुबै टिमले जित हात पार्दै क्वारटरफाइनलमा भेट पक्का गरेका हुन् । बेल्जियमले जापानलाई ३–२ गोलअन्तरको रोमाञ्चक जित निकाल्दै ब्राजिलसँग क्वाटरफाइनलमा भेट पक्का ग...
असार १८ गोलरक्षक डेनिजिल सुबासिकले तीन पेनाल्टी बचाएपछि पेनाल्टी सुटआउटमा डेनमार्कलाई पाखा लगाउदै क्रोएशिया क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। रसिया विश्वकप अन्तर्गत आइतबार राति सम्पन्न खेल निर्धारित समय र थपिएको समयमा १–१ को बराबरीमा रोकिएपछि पेनाल्टीतर्फ धकेलिएको थियो। पेनाल्टी सुटआउटमा सुबासिकले सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै तीन पेनाल्टी रो...
विश्वकप फुटबल: आज प्रि क्वाटरफाइनलका लागि स्पेन र रुस तथा क्रोएसिया र डेनमार्क भिडदै
विश्वकप फुटबलमा आज प्रि क्वाटरफाइनलका दुई खेल हुनेछन् । आज स्पेन र रुस तथा क्रोएसिया र डेनमार्क भिड्नेछन् । रुसको राजधानी मस्कोमा नेपाली समय अनुसार वेलुकी पौने ८ वजे स्पेन र रुसको खेल सुरु हुनेछ । समुह बी को विजेता स्पेनले समूह चरणमा ईरानलाई हराएको थियो भने पोर्चुगल र मोरक्कोसँग बराबरी खेलेको थियो । उता आयोजक रुस भने समुह ए को उपविजेता बन्दै ...
एजेन्सी । बिहीबार राति भएको समूह एच को खेलबाट नअकाउट चरणमा समूह विजेता बन्दै कोलम्बिया र उपविजेता बन्दै जापान प्रवेश गरेका छन् । तर, समूह एचको खेलले आम दर्शकलाई चकित बनायो । जहाँ तेस्रो स्थानमा रहेको कोलम्बियाले सेनेगललाई पराजित गर्यो भने अर्कोतिर समूह चरणबाट बाहिरिसकेको पोल्याण्डले जापानलाई पराजित गर्यो । जापान पोल्याण्डसँग १—० गोलले पराजित...
सर्बियालार्इ पराजित गर्दै ब्राजिल लगातार १३अौं पटक अन्तिम १६ मा
असार १४ ब्राजिलले लगातार १३अौं पटक विश्वकप फुटबलको अन्तिम १६ मा स्थान बनाएको छ। बुधबार राति भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा २-० गोलअन्तरले गोलअन्तरले पराजित गर्दै ब्राजिल समूह विजेता बन्दै नकअाउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। १९७० यता लगातार दोस्रो चरणमा स्थान बनाउँदै अाएको ब्राजिलले अन्तिम १६ मा अब समूह एफ को उपविजेता मेक्सिकोसँग सोमबार सामना ...
अर्जेन्टिनाको अप्रत्यासित जित पछि खुसी थाम्न नसकेर बिरामी परे म्याराडोना
एजेन्सी । मंगलबार रातिको खेलमा नाइजेरियामाथि अर्जेन्टिनाको २—१ गोलको अप्रत्यासित जितसँगै रंगशालाको विशिष्ट कक्षमा रहेका अर्जेन्टिनाका फुटबल लेजेन्ड डिएगो म्याराडोना बिरामी भए । नाइजेरियालाई पराजित गर्र्दै अर्जेन्टिना अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेपछि रंगशालामा खेल हेर्दै गरेका म्याराडोना निकै उत्साहित भएका थिए । अर्जेन्टिना र नाइजेरियाबीचको खेल सुरु...
आज समूह 'सि'को टुंगो लाग्नेछ ,नकआउट चरणमा पुग्ने डेनमार्कको बलियो सम्भावना
एजेन्सी । विश्वकप फुटबलअन्तर्गत समूह सि बाट विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने टिमको टुंगो आज लाग्दैछ । आज समूह सि अन्तर्गत फ्रान्स र डेनमार्क तथा पेरु र अष्ट्रेलियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । रसियाको लुजिञ्की रंगशालामा नेपाली समय अनुसार ७ बजेर ४५ मिनेटमा फ्रान्सले डेनमार्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । फ्रान्स यसअघिको आफ्नो दुई खेलमा लगातार जित ...
असार १२ क्रिस्टियाना रोनाल्डो पेनाल्टी चुकेको खेलमा इरानसँग बराबरी रोकिदैँ पोर्चुगल अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ। सोमबार राति भएको खेलमा इरानले इञ्जुरी समयको पेनाल्टीबाट बराबरी गोल फर्काएपनि समूहमा दोस्रो बन्दै इतिहासमा चौथो पटक पोर्चुगल विश्वकपको अन्तिम १६ मा पुगेको हो। यसअघि १९६६, २००६ र २०१० मा मात्रै पोर्चुगल दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न...
सन्यास रद्द गरेपछि विश्वकप जित्ने मेस्सीको यस्तो सपना
एजेन्सी । अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीको चर्चा रसिया विश्वकप सुरु भएदेखि नै भइरहेको छ । विशेषगरी अर्जेन्टिनाले लगातार दुई खेलमा देखाएको कमजोर प्रदर्शनले उनीबारे विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । मेस्सीले अर्जेन्टिनाबाट सन्यास लिनेसम्मका हल्लाहरु सामाजिक सञ्जालमा चले । तर, मेस्सीले भने आफ्नो ३१ औं जन्मदिनको अवसरमा अंग्रेजी पत्रिक...
जर्मनीको स्वीडेनमाथि २-१को रोमाञ्चक जीत
एजेन्सी रसिया, असार १० जर्मनीले खेलको अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै स्वीडेनलाई २-१ ले पराजीत गरेको छ। जीतसँगै समूहचरणबाटै बाहिरिने खतरामा पुगेको जर्मनीले जारी विश्नकपमा नकआउट चरणमा पुग्ने आशालाई जीवित राखेको छ। खेलको अतिरिक्त समयको ५ औं मिनेटमा गोल गर्दे जर्मनीले खेलमा जीत हासिल गरेको हो। जर्मनीका लागि विजेता गोल करोसले गरेका थिए। समूहको अन्त...